सलमान खानले किन आफ्नै बडीगार्डलाई थप्पड हाने ? - Purbeli News
सलमान खानले किन आफ्नै बडीगार्डलाई थप्पड हाने ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २३, २०७६ समय: ११:१७:२२
एजेन्सी / अभिनेता सलमान खानको एउटा भिडियो भाइरल बनिरहेको छ, जहाँ उनले एक सेक्युरिटी गार्डलाई थप्पड हानेका छन् । यो घटना प्रदर्शनरत फिल्म ‘भारत’को प्रिमियरको हो । मानिसहरुको भिडमा एक बच्चा फसेको थियो । सोही बच्चाको उद्दार गर्नुको साथो सलमानका बडीगार्डले धकेलिदिएका थिए । जसका कारण बच्चा भुँईमा थचक्क बसे । यसरी बच्चामाथि दुव्र्यवहार गरेपछि अभिनेता खानले बढीगार्डलाई थप्पड हानेका हुन् ।
दबंग खानको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘भारत’ मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको इद पर्वको अवसरमा दर्शकमाझ बुधबारदेखि रिलिज भइकसेको छ । फिल्मलाई दर्शकहरुले रुचाईरहेका छन् । फिल्मको ट्रेलर र गीत/संगीतहरुलाई पनि निकै रुचाइएको थियो ।
यो फिल्ममा सलमानको साथमा अभिनेत्री क्याट्रिना कैफ, ज्याकी श्रफ, दिशा पटानी, सुनिल ग्रोवर, तब्बु लगाएत कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ । ‘भारत’ एक पिरियड ड्रामा फिल्म हो, जुन साउथ कोरियन फिल्म ‘ओड टु माई फादर’को हिन्दी रिमेक हो ।